Akụkọ - Gịnị kpatara igwe eji eme nwa bebi na -ewu ewu?
Igwe Egwuregwu Swing
Igwe Egwuregwu Kid
Igwe Egwuregwu Onyinye
Capsule ụmụaka igwe
Mkpọrọ kreenu igwe
Ngwa Onyinye Ọzọ
Igwe Nweta Onyinye
Igwe Egwuregwu Hockey
Igwe Egwuregwu Egwuregwu
Igwe Egwuregwu ọkpọ
Igwe Egwuregwu Simulator
Ngwa igwe egwuregwu
Igwe eji agba ọsọ simulator
Igwe na -agbapụ simulator
Egwuregwu Egwuregwu Arcade
Igwe egwuregwu bọọlụ agbapụ
Ụlọ ihe ngosi
Kedu ihe mere igwe eji eme nwa bebi ji ewu ewu?
Igwe eji eme bekee na ụdị igwe na -ere ahịa ugbu a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile. Na mgbakwunye na ụlọ ahịa igwe ihe eji egwuri egwu, ha nọ n'okporo ụzọ ụlọ ahịa, n'akụkụ sinima, n'okporo ụzọ ụlọ ahịa ụmụaka ma ọ bụ ụlọ nri, yana n'ọnụ ụzọ nnukwu ụlọ ahịa.
Kedu ụdị ndị na -eri nri bụ ndị na -enweta igwe mbo mgbokwasị claw?
Gịnị kpatara ha ji ahọrọ igwe nwa bebi mboanuohia? Kedu ihe mere ha ji dị njikere ịnọgide na -atụfu ego?
Dị ka anyị niile maara, ụmụ agbọghọ na ụmụaka bụ ndị otu na -eji igwe eji eme bekee eme ihe. Ndị otu egwuregwu abụọ a so n'òtù ndị na -eji ezi uche eme ihe. Ọ dị mfe igwu igwe nwa bebi n'ihi ọmarịcha ụmụ bebi ndị a mara mma. Tụkwasị na nke a, n'ime ọha mmadụ nke oge a, ọsọ ndụ na -agba n'ike n'ike, oge ndị mmadụ kewara ekewa. Igwe eji eme nwa bebi bụ ụzọ dị nkọ iji jiri oge kewara ekewa nke ndị mmadụ na -akwụ n'ahịrị, na -eche ụgbọ ala, wdg, ka ndị na -azụ ahịa wee nwee ike nwee ọ funụ na oghere oge. Yabụ, ndị di na nwunye, ezinụlọ, ụmụ agbọghọ na otu ndị ọzọ bụ ndị nwe igwe bebi. Ọ bụ isi ihe na -adọta ndị na -eto eto ịgbaso usoro a na -eme, ghọta ihe ịchọ mma nke ụlọ ahịa ahụ, ma jiri ihe ịchọ mma nke ụlọ ahịa dị n'ime mee ka ndị na -azụ ahịa see foto wee gbasaa, wee mepụta mgbasa ozi nke abụọ.
Mgbe enyi nwoke nwoke chọrọ igosi ọmarịcha ya hụrụ na nwa agbọghọ ọ hụrụ n'anya chọrọ nwa bebi na igwe nwa bebi, nwa nwoke ahụ ga -ewepụta onwe ya itinye ego iji jide nwa bebi ahụ. Ihe kpatara ya dị nfe, naanị iji gosi ike ya ijide nwa bebi. Na -ele nwa bebi n'ime igwe nwa bebi ahụ, jiri nwayọ kwaga mbo ụkwụ ya nwayọ, ịghara ikwu na ịnweghị ike ijide nwa bebi ahụ. Naanị mbọ a siri ike nwere ike ịdọta ụmụ agbọghọ.
Ọ bụrụ na ijide anya bụ mmalite, mgbe ahụ nwa bebi ahụ bụ isi igwe igwe nkịta, nke m kwenyere na anyị niile ghọtara. Nwa bebi mara mma ma dị ọhụrụ, ga -adị mma n'anya, ọkachasị ụmụaka na ụmụ agbọghọ. Ụfọdụ onyinye mara mma, ma ọ bụ mara mma, ma ọ bụ ihe mara mma, ma ọ bụ ụdị ejiji, ka onye ọ bụla chọọ inweta ha
N'ezie, IP a ma ama bụkwa nhọrọ ọhụrụ. Dị ka anyị niile maara, ọtụtụ ndị na -eso ya na -eso IP na -ekpo ọkụ. Mmeghe nke ngwaahịa elu IP na -ewu ewu ga -adọtakarị ndị ahịa
Maka ndị na -azụ ahịa, igwu igwe nwa bebi nwere ike iweta mmetụta obi ụtọ na ịdị ọhụrụ oge ọ bụla. Ọtụtụ ndị na -eto eto na -ele egwuregwu a anya dị ka ụzọ isi hapụ nrụgide. Maka ụmụ bebi, ịma mma nke onyinye bụ nrụpụta mbụ na -adọta ndị na -azụ ahịa. Ya mere, ekwesịrị imelite ngwaahịa ọdịnaya nke igwe bebi. Ka ọ dị ugbu a, ngwaahịa ndị bụ isi bụ ihe ọdịnala na ihe okike, dị ka nwa bebi plush. Ndị Japan ewepụtala igwe mgbodo bara nnukwu uru, igwe nri achịcha achicha, na igwe akpụkpọ ụkwụ, nke na -agbasawanye ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ.
Oge ezipụ: Dec-15-2020
101.No 9, n'ebe ọwụwa anyanwụ ọdịda anyanwụ Cross Street, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China